Pyonepan Way: January 2015
Posted by Toe Yee Yee at 5:21 AM No comments:
Posted by Toe Yee Yee at 9:50 PM No comments:
အထာတွေ မကျတကျ ဖြစ်နေတာကိုက
သံသယတွေက ငါ့ကို ရှိုက်သွင်း
မြန်မြန်လေး ငါ့နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်ပါ ဝီလျံ
ငါ့ သစ္စာတရားပါ ဝီလျံ
မျက်နှာဖုံးတွေ အကြိမ်ကြိမ် လဲတပ်လာခဲ့ပါ
တပ်ပြီးရင်း တပ်နေတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေကို
ငါ့ကို ပြန်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါ ဝီလျံ
ငါမလာခင် နှင်းဆီခင်းတွေကိုလည်း ရေလောင်းထားပါ
နင့်မျက်နှာဖုံးတွေရဲ့ စေစားရာမှာ ပြုံးအောင်နေတတ်သူပါ။
မနက် ၁၀ နာရီ ၄၈ မိနစ်
Posted by Toe Yee Yee at 11:33 PM No comments:
Posted by Toe Yee Yee at 8:28 AM No comments:
နေ့ရက်တွေ ချိုဖူးတယ် အေးရေ...
ပျော်ပါးစရာ မဟုတ်ဘူး အေးရေ...
အေးကို မပန်ရက်ခဲ့ပါဘူး အေး
နှုတ်ဆက်ဖို့ အချိန်မရခဲ့ဘူး အေးရယ်
ကျော်ဖြတ်ခွင့် မရှိဘူး အေးရယ်
မျက်ရည်တွေ သုတ်လိုက်ပါ အေးရယ်
အေးဟာ အေးအသစ်အဖြစ် ခံယူလို့
ချစ်တဲ့ အေးဘဝကို ငေးလို့
( မောင်မိုးအေး )
Posted by Toe Yee Yee at 12:38 AM No comments:
ပါးပြင်မှာ မျက်ရည်တစ်အုပ် အထွေးလိုက် ပြေးဝင်လာကြရဲ့
ကျမကို သူက အနမ်းတွေပျိုးပေးတယ်
Posted by Toe Yee Yee at 11:05 PM No comments:
ဒီ…… တစ်မနက်ကလေးပါပဲ ချစ်သူ……။
နွမ်းသွေ့သွားခဲ့ ပန်းကလေးတွေ အကြားးး
ချစ်တဲ့နင့် အားးးး… ပေးအပ်ဖို့……။
အရာရာ ပျောက်ဆုံး လွင့်ပျက်ခဲ့လည်းးး
တစ်ယောက်တည်းးး သွားဖို့ မဟုတ်ခဲ့လည်းးး
အသက်ပုံနှင်းးး အသည်းချင်းးး ထပ်
သိပ်ချစ်တတ်တာ နင်ပျော်မှာ … ရွယ်ကိုး…
တိုးတိုးပြီးးး ချစ်ခဲ့…… နွမ်းယဲ့ယဲ့ ရင်… အဆိပ်ပင်ကို ရေလောင်းးး…
ပေါင်း သင်ခဲ့တဲ့ ငါ………
နင့် အလွန်ပါလည်းးး အဆိုခက်…
မနက်ဖြန်များစွာ… မျောမဲ့ "မြစ်"…
ဒီ တစ်မနက်ခင်းးက…… စ ရှင်တယ်……။
Posted by Toe Yee Yee at 12:14 PM No comments:
အားရ ကျေနပ် ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ
ပီတိ ဇော အဟုန်
မိမိအတ္တနှင့် မိမိအဆိပ်သင့် တွေးထင်ခဲ့မိ
စိုးစဉ်းမျှ ပူပန် သောက ဗျာပါဒ
အတိတ်၌ ဖျက်မြင်းဟီသံ ခွာပြင်သံများ
ဤ အဆောက်အအုံသည် အိုမင်း ရင့်ရော်
နေထိုင်ရန်တစက်ကလေးမှမသင့် စသည် စသည် စသည်ဖြင့်
မပါရှိပါသဖြင့် တကိုယ်လုံးပုံအပ် ယုံမှတ် မှားယွင်း
လီဆယ် ဖြားယောင် သွေးဆောင်ခြင်းမဲ့
ခြင်္သေ့အမရဲ့ရင်ထဲ သည်းသည်းမည်းမည်း
မေ ငိုနေတယ် မိုးသည်းထဲမှာကွယ် ထိုင်လျက်
မပွင့်ခင် သူ့ မြေပေါ်မှာဘဲ သူ့ မြေဆီသြဇာနဲ့ 
သူစိုက်ခဲ့တဲ့ပန်းမို့တယုတယ တမြတ်တနှိုး အကွပ်မဲ့လလို
သူ့ ကိုဘဲ မျှော်မှန်း ရင်းနှီး မြှပ်နှံ
သဒ္ဒါဝါကျမမှန်မှန်းသိပေမဲ့ ဒါက ချစ်တယ်လို့ ပြောတာဘဲ
လို့တထစ်ချ ယုံကြည်ကိုးစား
မငြူမစူ မငြင်းမဆန် အရာခပ်သိမ်း ကိုယ့်ရေတိမ်ထဲ
ကိုယ်ပြန်နစ်တော့မဲ့ ပျက်ခါစရေတွင်းတတွင်းရဲ့ 
သွေးနှင့်ကိုယ်သားနှင့်ကိုယ်နှင့် စိတ်မှာ အရှုးမီးဝိုင်း
ခါးပိုက်ဆောင်ခံလိုက်ရသည့် မိမိကိုယ်အား မိမိ သုတ်သင် ကုတ်ခြစ် ချေမွ
ကင်းလွတ်ရာကင်းလွတ်ကြောင်း အဆုံးများ သတ်မိရာသတ်မိကြောင်း
ကိုယ်မှတပါး အခြား အထင်အရှားပြဆိုရန်မရှိတော့ပါသဖြင့်
မှီတွယ်ရာမဲ့ နှင်းတစက်ကဲ့သို့ကမ္ဘာငယ်ခြေရင်း
ဤ သုသာန်တွင်း၌ တစ္ဆေတို့ ငိုယို
မျက်မုန်းကျိုးသူများ ကဲ့ရဲ့စောင်းမြောင်း
အသစ်ရောက်လာခဲ့သော ကျမ၏ဓါတ်ပြားဟောင်းအား ဖွင့်၍ ဖွင့်၍
ပွင့်၍ ပွင့်၍ ဂူတံခါးတို့ သည် တဂျိန်းဂျိန်း
မိုးတို့ သည် တခြိမ်းခြိမ်းနှင့်
ရက်မလည်ရသေးတဲ့ ကျမ အရမ်းကြောက်တယ် မောင်.......။................။
Posted by Toe Yee Yee at 7:55 AM No comments:
★“ အပြစ်ကင်းချစ်ခြင်း မင်းမြင်စေ ”♪♫
အတွယ်အတာမိုး… ရင်မှာ ပျိုး..
တစ်ရေးးနိုး အချစ်… အိမ်မက်တို့.. မဖြစ်စေရ…
သံယောဇဉ်နွယ်.. ရင်ဝယ် တွယ်ရစ်…
တစ်ထစ်ချင်း ခွေ… မြစ်မင်း ဧရာ…
ပမာသို့ထား… ရင်မှာ ပွားစီး…
သမုဒယ အဖျားဖူး… ရင်ဝယ် စူးနစ်…
ဆူး အဖြစ်သို့… ပြောင်း…
တိုးကာ ငင်သစ်…. ရင်ထဲ နစ်ခိုက်….
သစ္စာ နှင်းလျှက်… ချစ်မပျက်ပါ…
သက်ထက်ဆုံးထိ… ရင်မှာ ငြိတွယ်…
အလွမ်း ရွယ်ကိုး … အချစ်တိုးခဲ့…
ရင်ပျိုးမေတ္တာ… မုသား ပါဘူး…
ဆုံဆည်းရမည်… ရေစက် ပီပြင်…
ချစ်ကြိုးငင်တွယ်… ထာဝရ ရွယ်ကိုး… ပြန်လာနိုးနှင့်…
Posted by Toe Yee Yee at 4:26 PM No comments:
အရင်က မျက်ရည်လွယ်တဲ့ ငါ
အရင်က အရမ်းအားနားတတ်တဲ့ ငါ
အခု ဥပက္ခာ ပြုတက်လာပြီ
အရင်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို အရမ်းဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ငါ
အခု မမြင်ချင်ယောင်မကြားချင်ယောင်မသိချင်ယောင် ဆောင်တတ်လာပြီ
အရင်က ရုပ်မချောမလှ ပေမဲ့ ချစ်စရာကောင်းအောင် ပြုံးနေတတ်တဲ့ ငါ အခု မဲ့ပြုံးလေး ပိုပြုံးလာပြီ
အရင်က သူများ ဘာပြောပြော နားယောင်ယုံတတ်တဲ့ငါ
အခု သူများကို ဘာတစ်ခုမှ မယုံကြည်တတ်တော့ဘူး
အရင်က သူများကို မျက်လုံး လှန်မကြည့်ရဲတဲ့ ငါ
ကဲ့ ဘာတွေကများ ငါ့ကို ပြောင်းလဲစေတာလဲ ??????
အဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြားထဲမှာတော့
ငါ အရာအားလုံးကို ကျေနပ်တယ်
Posted by Toe Yee Yee at 8:09 AM No comments:
posted by ဆည်းဆာ
Posted by Toe Yee Yee at 5:45 PM No comments:
ဒါပေမဲ့မင်းဆိုတာဆက်သွယ်မှုဧရိယာ အပြင်ကလူလို သဘောထားပြီးဖုန်းကိုပဲ
'' ကိုယ်မျက်ရည်ကျဖို့ ထိုက်တန်တဲ့သူဟာ
ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး '' ဆို
Posted by Toe Yee Yee at 6:16 AM No comments:
တကယ်တမ်းတော့ ငါနဲ့ သူနဲ့ ကြားမှာ မင်းဆိုတဲ့ တတိယလူတစ်ယောက်
သူ့ငါ့အပေါ် အေးစက်ပြောင်းလဲသွားထဲကပါ
ငါ့ကို မလိမ်ညာတတ်တဲ့ သူ့ ကြောင့်
ငါဟာမင်းရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို တစ်စွန်းတစ်စ သိခဲ့ရပါတယ် မိန်းကလေး။
ငါသူ့ ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်။
သူမရှိတော့ရင် ငါ့ဘ၀မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ
ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူကိုတောင်မှ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းလျော့နည်းရလားဆိုပြီး မင်းငါ့ကိုဟားချင်လည်းဟားမယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်.............ငါတို့ နှစ်ယောက်လုံးဟာ မိန်းကလေးတွေမို့ 
ငါမင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး ယဉ်ကျေးတဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ ပဲ ဆက်ဆံပါရစေ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ခွန်းကြီးခွန်းငယ်စကားများရန်ဖြစ်ပြီး
မိန်းကလေးသိက္ခာကျဖို့ ဆိုတာ ငါတို့ အတွက် မတန်ဘူးမဟုတ်လား။
မင်း ရိုင်းသလို ငါလည်းရိုင်းရိုင်းပြောတတ်ပါတယ်
မင်း မသိမ်မွေ့ သလို ငါလည်း မသိမ်မွေ့ ခြင်းအတက်ပညာတွေတတ်ပါတယ်
တကယ်လို့မင်းအတွက် သူဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာ သေချာတယ်ဆိုရင်
ဒီကစားပွဲကနေ ငါနုတ်ထွက်ပေးပါ့မယ် မိန်းကလေး။
အဲတာ ငါ့သူ့ ကိုသိပ်ချစ်လွန်းလို့ ပါ
ငါ့အချစ်တွေကိုနောက်ဆုံး ငါသိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်တဲ့သူ့ အတွက် ပြစရာ ပေးဆပ်စရာ ဒါနောက်ဆုံးမို့ လို့ ပါ
သစ္စာမရှိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက် အတွက်နဲ့ တော့ ဘာလို့ အချိန်ကုန်ခံတော့မလဲကွယ်။
ဒီကစားပွဲကနေ ငါနှုတ်ထွက်သွားခြင်းဟာ ငါ့သဘောဆန္ဒအရပါဆိုတာတော့
ဒါပေမယ့် ငါမနှုတ်ထွက်မီ စကားတစ်ခွန်းတော့ ပြောပါရစေ မိန်းကလေး။
ခြံခုန်ဖူးတဲ့နွားဆိုတာ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မခုန်တော့ဘူးလို့မင်းမထင်ပါနဲ့ ။
ဒီအကြောင်းကိုသိရှိတဲ့ ပထမလူဟာ ငါဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်
ဒုတိယလူဟာ မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တော့ ယတိပြတ်မပြောပါနဲ့ ။
တစ်ချိန်တုန်းက သူဟာလည်း ငါ့ကို ခုသူမင်းကိုပြောနေသလိုမျိုး
ချိုသာတဲ့ ချစ်စကားတွေ လှိုင်လှိုင် ပြောခဲ့ဖူးတာပါပဲ။
မင်းသူနဲ့ လက်တွဲမယ်ဆိုရင် ငါကတော့
ကျိန်စာတိုက် အငြိုးထားမယ့်သူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ငါ့ကို ရှုံးနိမ့်သူလို သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်
မင်းကိုယ်တိုင်ဟာလည်း အောင်နိုင်သူမဟုတ်ကြောင်း တစ်နေ့ တော့ သိလာပါလိမ့်မယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောပါ့မယ်။ ဒီကစားပွဲကနေ ငါနှုတ်ထွက်ပါတယ်။
သူနဲ့ တွဲလို့မင်းပျော်ရွှင်မှာသေချာရင် ဒါဟာငါမင်းကို ပေးခဲ့တဲ့
လက်ဆောင်လို့ ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ပြောခဲ့ပါရစေ။
တစ်နေ့ နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါ့ကိုမင်းပြန်တွေ့ ခဲ့ရင်
အပေါစားပစ္စည်းကို ညာပြီး အရောင်းခံလိုက်ရတဲ့ ဖောက်သည်တစ်ယောက်က ဈေးသည်ကို
ရန်တွေ့ သလိုမျိုးတော့ လာမတွေ့ ပါနဲ့။
အဲ့ဒီ အပေါစားပစ္စည်းက မင်းကိုယ်တိုင် ငါ့လက်ထဲက ကျေကျေနပ်နပ် လုသွားတဲ့ ပစ္စည်းဆိုတာ မင်းသဘောပေါက်ပါစေ မိန်းကလေးရေ.......
ငါ့သိပ်ချစ်လွန်းတဲ့လူကို အပေါစားပစ္စည်းလို့ သုံးနှုန်းလိုက်တာက မင်းလက်ထဲရောက်သွားတာနဲ့ 
မင်းချစ်တဲ့လူဟာလည်း တန်ဖိုးမရှိနိုင်တော့မှာကို ငါကောင်းကောင်းသိနေလို့ ပါ
သူ့ ဟာသူနေရင် ( သို့ မဟုတ်) ငါနဲ့ အတူနေရင် တန်ဖိုးတတ်နေမယ့်အရာတစ်ခုဟာ မင်းကြောင့်အပေါစားပစ္စည်းဖြစ်သွားရတဲ့အတွက်ဒီလိုသုံးနှုန်းလိုက်တာပါ။ မင်း နဲ့ အပြိုင်မလိုချင်တော့တဲ့
Posted by Toe Yee Yee at 7:45 AM No comments:
★“ ရင်ရိပ်ညို ”♪♫
စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး… သွားချင်သူ တစ်ယောက်ကို….
လိုက်ဆွဲထားဖို့ ၀ါသနာ… ငါ့ မှာ… မပါဘူးကွယ်…..။
ငါဟာ…. ပိုက်ကွန် တစ်ခု မဟုတ်ဘူး….
ငါဟာ… ငါးမျှားချိတ် တစ်ချောင်း မဟုတ်ဘူး….
ငါဟာ… နွယ်ရှင် တစ်ပင် မဟုတ်ဘူး….
အေးမြ သာယာတဲ့ အရိပ်တစ်ခုကို…
ပေးစွမ်း ခြွေချပေးမဲ့... ညောင်ညိုတစ်ပင်သာ ဖြစ်ပါတယ်…။
ခိုပါ… နားပါ…. အပန်းဖြေပါ….
ငါ့ အသီးတွေကို… စားသုံးပါ….
ငါ့ အရိပ်မြေမှာ… ချွေးသိပ်ပါ…..။
ငါ့ အကိုင်းကို... မချိုးပါနဲ့….
ငါ့ အမြစ်ကို… မဖြတ်တောက်ပါနဲ့….
ငါ့ အရိပ်မြေကို… ခြေစုံမကန်နဲ့….။
နားချင်တယ်လား… လာ နားလှည့်ပါ…
သွားချင်တယ်လား… ပျံ ထွက်သွားပါ….
ဘယ် အရာကိုမှ တားမြစ်မထားဘူး….
လွမ်းပိုပေမင့်… မပြိုလင့်တာ…. သိထားပါ……။
Posted by Toe Yee Yee at 11:49 PM No comments:
အရာရာဟာ … နေသားတကျ….
သူ့ နေရာမှာ သူ .. ထွန်းလင်းလို့…..
သူ့ နေရာမှာ သူ… ထိန်ထိန်သာလို့……
Memory Stick ဖြူဖြူကလေးကလည်း… Lap Top လေး နံဘေးနားမှာ…
ငြိမ်သက်စွာ… အိပ်စက်နေရင်းးးး… အရာရာဟာ… နေသားတကျပါပဲ…..။
စီးကရက် မီးခိုး အငွေ့တွေ.. လွင့်ပျံ ဝေ့၀ဲနေတဲ့…
ဆိတ်ငြိမ်စွာ.. ကြေကွဲနေရင်းးးး. အရာရာ ဟာ… နေသားတကျပါပဲ……။
ဝေ့၀ဲ လွင့်ကျလာတဲ့..ရော်ရွက်ဝါ အကြွေတစ်ချို့ရဲ့....
ရင်ခွင်ဆီ တိုးဝှေ့ ရိုက်ခတ်နေရင်းးး…. အရာရာဟာ… နေသားတကျပါပဲ……။
မင်းထားခဲ့တဲ့.. အထီးကျန်အထုပ္ပတ္တိတစ်ပုဒ်ရဲ့ အလည်မှာ..
ယောင်ခြာခြာ.. ငါ တစ်ယောက်ထဲ….
မျက်ရည် မ၀ဲဘဲ… အသည်းထဲမှာ ငိုကြွေး.…
ရှိုက်သံမဲ့ တေးချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့အတူ … ရင်ကွဲပက်လက်… တမ်းတနေရင်းးးးး…..
ငါရဲ့.. လွမ်းဆွတ်ခြင်းတို့ အကြားးး…. အရာရာဟာ.... နေသားတကျပါပဲ…..
Posted by Toe Yee Yee at 1:41 AM No comments:
ချစ်ခြင်းတရားကိုဗလက္ကာရပြုခံရတဲ့နောက်သေနေတဲ့စိတ်နဲ့ လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေမှာ လောက်တွေဖွေးဖွေးတက်ခဲ့တယ်။
နင်ပျော်ပါစေကွာလို့ မိုက်ရူးရဲဆန်ဆုတောင်းမှုကို နာကျည်းချက်က သေမိန့်ချခဲ့တယ်။
ဟန်မူရာဘီလို ဥပဒေသစိတ်နဲဆို နင့်နှလုံးသားကြွေမွပျက်စီးနေတာကြာပြီ။
စိတ်တစ်ကွေ့မှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ လောကဓံထဲ နင်လည်းလူတစ်ဦးမို့ ဖက်လှဲတကင်း ကြုံစေရမယ်။
ငါ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ချနင်းခဲ့တဲ့ နင် ... ငါ့နှလုံးသားသွေးနဲ့ တိုင်တည်မှုပြုခဲ့မယ်။
တံတားလိုခင်းခဲ့တာကို နင်းရုံတင်မက ချိုးချေသွားခဲ့တဲ့နင် ...
ဒဏ္ဏာရီထဲက သစ္စာနဲ့ချစ်ခြင်းတရားတွေဟာ နင့်လက်နဲ့ထိလို့ လောင်မီးပြာကျပါစေ။
ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် နင့်ကို လူရှုပ်လို့မြင်ကြပါစေ။
နင်ကလွဲပြီး မိန်းမမှန်သမျှဟာ တစ်ခြားယောကျာ်းများအပေါ် တိမ်းမူးရီဝေမူးယစ်ပါစေ။
သံသရာတစ်ကွေ့ နင့်ကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရင်တောင် ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမဘ၀ကြား နင်ဖြစ်ပါစေသား။
အို ... ဘုရားသခင် .....
အမှောင်လမ်းကိုရောက်နေရတဲ့ဘ၀မို့ သွေးစက်လက်နဲ့ ကျိန်စာပြုခဲ့ပါတယ်။
အာမင် ......။ ။
Posted by Toe Yee Yee at 10:18 PM No comments: